I-China ithathe indawo yokuphakamisa okuzenzekelayo kwindawo ephakamileyo yokucoca indawo yomzi-mveliso kunye nababoneleli |Guotao
ukuphakamisa okuzenzekelayo endaweni yesihluzo sobude obuphakamileyo
Isihluzo esitsha esithatha indawo yezisombululo ezifunyenwe sisihluzo se-GT.
Ngaba uyayazi indlela yokutshintsha isihluzo somoya ngaphandle kokukhwela ileli?
Indlela yokubuyisela izihluzi zomoya zenkqubo ye-AC kwisiseko sokuqinisekisa ukhuseleko lomqeshwa?
Ujongo lwesicelo Thumela i-imeyile kuthi
Iinkqubo ze-AC zisetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwiimo zemveliso ezahlukeneyo ngenxa yemigangatho yoshishino okanye iimfuno zempilo yabasebenzi.
Ukuqinisekisa umgangatho womoya, izihlungi kwinkqubo ye-AC zinobomi benkonzo kwaye kufuneka zitshintshwe rhoqo.Kuxhomekeke kumgangatho womoya kunye nokusetyenziswa kwemfuno.,izihluzi zomoya ziya kuba nesiqhelo umjikelo woBubuyelo,awudingi ukwenza lo msebenzi rhoqo,kodwa phantse kube kanye ngekota.
Kuyaziwa ukuba ukuphakama okusemgangathweni kwezityalo zoshishino ngu-5-40m.Xa i-workshop yakho ineemfuno zomgangatho womoya, njani ukubuyisela ngokukhuselekileyo isihluzo somoya kwi-workshop ephezulu?
Ngokubanzi, uninzi lweefektri zenza umsebenzi wokutshintsha ngokwazo, ngeleli kwaye zathatha amaxesha athile.Okanye unokucela inkampani yeenkonzo zobuchwephesha.Ebudeni obuthile, uxinzelelo lwengqondo olubangelwa ngabantu alukwazi ukujongelwa phantsi.ukunyaniseka,Ayikhuselekanga ngenene phaya phezulu.
Indlela yokubuyisela izihluzi zomoya zenkqubo ye-AC kwisiseko sokuqinisekisa umsebenzi'ukhuseleko?
Ngoku, Isihluzi se-GT siqale saphuhlisa isinyusi sokutshintsha esizenzekelayo ukuze sihlangabezane nemfuno yakho yeendawo zokucoca ezinobude obuphezulu.
Ngesihluzo se-GT'Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza elizimeleyo.Le filter isetyenziswe kwi-GAC Toyota's umsebenzi wokuvelisa.
Xa isebenza unokuyiqonda njengesihluzi sokukhwela,Xa uthatha indawo yecebo lokucoca, cofa nje ngobunono iqhosha kwaye liya kuthi chu liwele kuwe, cofa iqhosha ukuze unyuke umva emva kokubuyisela ezantsi.
Isihluzo se-GT igxile kwizisombululo zokwakha ezisekelwe kwiimfuno zakho kunokunika isisombululo sesitokhwe kwiimfuno zakho.Ngelixa'umgangatho'iinketho ziyafumaneka apho kufuneka phantse sisoloko sifumanisa ukuba kukho into eyongezelelweyo esinokuyizisa etafileni xa kufikwa kwingcaciso, ukusebenziseka ngokulula okanye isisombululo sobomi obude.
Ukunyuswa kwethu okuzenzekelayo kufumaneka kwiindidi ezahlukeneyo zobukhulu, ngeentsuku zokuqala zesakhiwo sakho sesityalo, sixelele inkqubo oyilindeleyo ye-ac, sinokwenza ukunyuswa okufanelekileyo ngokusekelwe kubukhulu bakho.
Njengomlinganiselo ongekho mncinci weemveliso ezisetyenziswa kumzi-mveliso, besisebenza ukufundisisa indlela yokunciphisa ngokusengqiqweni ngakumbi iindleko zemveliso ngomgangatho ofanayo, kwaye simenze asetyenziswe ngobuninzi, indawo eninzi yokutshintsha isihluzo sokunyuswa kokucoca.
Ngaphambili: Umgangatho olungileyo woMvelisi waseTshayina oVunyiweyo weCarbon Bag yoMoya Isihluzi soMoya esiSebenzayo seCarbon Pocket
Okulandelayo: Ixabiso loMzimveliso waseTshayina iMerv 11 yeAllergen yezihluzi zeZiko loMoya 14X14X1
Uhlobo Ukuphakama kwamaza (mm) Indawo engaphezulu (㎡/m3) ithiyori yeshiti inombolo.(I/m) Umlinganiselo ongenanto(%) Uxinzelelo lwehla(Mpa/m) F factor(M/s(kg/m3)0.5) SW-1 4.5 650 6-8 92 2-3.5×10-4 1.4-2.2 SW-2 6.5 450 4.5 96 1.6-1.8×10-4 2-2.4 Inqaba yokupakisha inqaba iphakathi kwezona ndlela zoqoqosho zikhoyo.Ihambisa ukwehla koxinzelelo oluncinci kwibhedi yokupakisha kunye neempawu ezibalaseleyo zolwelo lokusasaza kwindawo yonke yokupakisha.Njengoko ulwelo kunye nerhasi ihamba ngokupakishwa ngamathanki, imilo yokuvuleka kwi-t...
Impahla yokucoca ilaphu yokucoca umoya
Imidiya yokucoca Le mveliso ilungele iihoods zoluhlu, izicoci zomoya / izicoci, kunye nokugquma iiyunithi zeHVAC.Ilaphu lokucoca ikhabhoni esebenzayo I-Aperture 20-40PPI Ubunzima 40-50kg/m3 Ubungakanani 1m * 2m Ukutyeba 3mm ~ 30mm Yenzelwe ukulawula iingxaki zevumba eliphazamisayo kumoya ojikelezisiweyo ngokufanelekileyo, isusa ungcoliseko lwerhasi enevumba elimnandi nelicaphukisayo...
Ulwakhiwo lwemveliso Iphaneli isakhelo :Intsimbi estainless, aluminiyam Isihluzo imathiriyeli:Isikrini, umnatha wedayimani, umnatha otyatyiweyo Ubungakanani:L*W*H(Ukwenza okungeyomfuneko) Izinto:Aluminiyam,201,304 Ubuchule: G1-G4(EN779) Isicelo Central air conditioning coarse ukuhluzwa, izixhobo zokungenisa umoya kwimizi-mveliso yokuhluza kwangaphambili, i-oveni kunye nenye inkqubo yokungenisa umoya yobushushu obuphezulu;ukuhluza idokodo lokutshiza kwivenkile yendibano yeemoto;ilaphu le-aluminiyam yocingo lokuchasa kakuhle ukubola kubunzima obulula ...
Ukupakishwa okucwangcisiweyo kuhanjiswe ngokufanayo kwinqaba kwimilo yejometri.Ukupakishwa kunqanda ukuhamba kwegesi-ulwelo, kuphucula ukuhamba komjelo kunye nokuhamba kodonga, kwaye kunciphisa ukuhla koxinzelelo.Ngexesha elifanayo, likwabonelela ngommandla omkhulu kwaye ufezekise ubunzima obungcono kunye nokusebenza kokutshintshwa kobushushu.Ipleyiti eqengqelekisiweyo yepore epakishweyo ayinayo kuphela i-porosity ephezulu, indawo enkulu yendawo ethile, kodwa ikwaneenzuzo zamandla acinezelayo aphezulu, ukumelana nokothuka kwe-thermal, kunye nokusebenza okuphezulu...
Uhlobo Ukuphakama kwamaza (mm) Indawo engaphezulu (m2/m3) Uxinaniso (kg/m3) I-engile ethathiweyo Ukwehla koxinzelelo (pa/h) HETP(mm) Theory sheet no.m-1 F Factor (m/s(kg/m3)0.5) Ubude beCandelo(m) 250(AX) 12 250 125 30° 10-40 100 2.5-3 2.5-3.5 5 500(BX) 6.3 5300 40 200 4-5 2.0-2.4 3-4 700(CY) 4.3 700 130 45° 67 400-333 8-10 1.5-2.0 5 Ukupakishwa kwe-Metal wire gauze luhlobo lokupakisha okusanda kuthandwa okucwangcisiweyo.Isetyenziswa ngokubanzi kwaye ithandwa ngakumbi nangakumbi njengoko iphuhlisiwe.I-wire gauze iyapakishwa ...